Nanampy ny Malagasy tamin’ny famahana ireo fanontaniana rehetra miodidina ny toe-karena ny vondron’ny mpandraharaha eto Madagasikara (Groupement des entreprises de Madagascar, GEM) omaly tetsy amin’ny hotely Carlton. Samy nantsoin’izy ireo ny kandidà roalahy hifanatrika amin’ny fihodinana faharoan’ny fifidianana ny alatsinainy 2 novambra teo, hampahafantatra ireo paik’ady entiny hanandratra ny firenena.
Mpandraharaha no niantombohan’ny Andry Rajoelina kandidà laharana faha 13 ao amin’ny biletà tokana. Nivelatra tamin’ny orinasa mpanao dokam-barotra izy, ary nahazo ny laharana voalohany teto amin’ny ranomasim-be Indiana tamin’ny fahaiza manaony sy ny farisihany. Mahafantatra tsara ny olan’ny mpandraharaha eto Madagasikara ny tenany, ary manana vahaolana maty paika manoloana ireo sehatra rehetra miodidina ny fandraharahana. Toy ny teo amin’ny lafiny fandriampahalemana izay isan’ny mampatahotra ny mpandraharaha noho ny fakana an-keriny mirongatra eto Madagasikara.
Isan’ny olana teto amin’ny firenena hatramin’izay ihany koa ny fanodikodinam-bolam-panjakana, fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena, ary ny fisian’ny kolikoly isan’ambaratongany. Ny famahana ireo olana telo ireo anefa no tena isan’ny hiteraka voka-tsoa be indrindra hoan’i Madagasikara.
Rivom-pampandrosoana vaovao no entin’i Andry Rajoelina kandidà laharana faha 13 ao amin’ny biletà tokana amin’izao fotoana izao. Manoloana ny tantara, efa voasedra izy ary manome toky fa hampivoatra ny tontolon’ny fandraharana eto Madagasikara.
Efa ela i Andry Rajoelina no naniry hifanatrika tamin’ny vondron’ny mpandraharaha eto Madagasikara. Satria ankotran’ny fanomezany valin-teny tsara rafitra, dia niantso ireo mpandraharaha izy hanampy azy amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.
Taratra tamin’ny tafatafa niarahana tamin’ny GEM fa manana fahavononana hitondra firenena I Andry Rajoelina kandidà laharana faha-13 ao amin’ny biletà tokana ary koa efa niomana hatry ny ela amin’ny fanavotana an’i Madagasikara. Matotra, hendry, sahy ary vonona ny lehilahy. Tetsy ankilany , namaly ny fanontanian’ireo mpandraharaha ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, izay kandidà rahateo amin’ny fiodinana faharoan’ny fifidianana. Isan’ny naletiny tan-dohan’ny mpandraharaha teto ny maha maika sy mety amin’ny Malagasy.
Nandritra io fihaonana io, nitantara ny lalana nodiaviny i Marc Ravalomanana, ary nitantara ireo olana hitany tamin’ireo firenena sy tanàna noteteziny.
Mifanesy ny taona, ary mivoatra manarak’izany ny filan’ny Malagasy. Samy namelatra ny paik’ady entiny mampandroso ny toe-karena ireto kandidà roa ireto, ary samy nanana ny fomba fijeriny. Raha toa ka fomba fijery mitsinjo lavitra no nentin’I Andry Rajoelina, toa tsy izany kosa ny politikan-toekarenan’i Marc Ravalomanana.